Kube yinhloso yami, isikhathi eside, ukudala umsebenzi wobuciko obukodwa ovela kwabanamadlozi ahlukahlukene, ngiwahlanganisa ndawonye. Ngokuvumelanayo ukuvumela ukuphishekela kokudala kunikeze ukugeleza okufanayo ngesikhathi esisodwa kusuka kwesinye isihloko kuya kwesinye.
Kulesi siqephu esithile, angifisi nje kuphela ukudala umsebenzi wobuciko wendwangu owenziwe ngamehlo womabili, kodwa futhi nomzimba ophilayo wamaselula amaningi njengalesi sithombe. Ukuvumela isibukeli ukuthi sikubuke "njengobuciko obuphilayo" ngaphandle kokuba khona, ngamehlo engqondo nangomqondo womdali.
Isifiso sami bekuwukusebenzisa imibala efanayo ukuhlanganisa imodeli nendwangu njengamandla ayedwa wobuciko obukhoma. Ukuba khona okungapheli phakathi kwamandla amabili ahlukahlukene kakhulu njengeyodwa.